HowToUse သည် မည်သည့်နေရာတွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေအမျိုးသမီးများအားလုံးအတွက် အန္တရာယ်ကင်းသောကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များရယူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးရရှိသင့်သည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံသူတိုင်းအတွက် သတင်းအချက်အလက်များမျှဝေပေးနေသည့် အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
HowToUse သည်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးအသုံးမပြုခင် ဘာတွေ ကြိုတင်စဥ်းစားထားရမည်နည်း၊ အရည်အသွေးရှိသည့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးကိုမည်သည့်နေရာတွင် ရရှိနိုင်မည်နည်း၊ ဒီဆေးတွေကို မည်သို့ အန္တရာယ်ကင်းအောင် သောက်သုံးနိုင်သနည်း၊ မည်သည့်အရာတွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြင်ဆင်နိုင်သနည်း နှင့် လိုအပ်ပါကကျန်းမာရေးအကူအညီရယူနိုင်မှုများ အစရှိသဖြင့် လိုအပ်သော မှန်ကန်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ဝေမျှပေးနေသော ဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့က အမျိုးသမီးတို့ကိုယ်တိုင် လုံခြုံစိတ်ချအန္တရာယ်ကင်းသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးနေသည်။
HowToUse သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအမျိုးသမီးများအားသတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များကို ထောက်ပံ့ရန် ရှိနေပါသည်။ လောလောဆယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဘာသာပေါင်း 30 မျိုးသို့ပြန်ဆိုထားပါသည်။ သင်ဖတ်ချင်တဲ့ ဘာသာစကားရှာမတွေ့လို့ အကူအညီလိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် info@howtouseabortionpill.org က တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများရှိသတင်းအချက်အလက်တိုင်းကို တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်ကြိုးပမ်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ သို့သော် တင်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာများသည် အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်သည့်အတွက် ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များသည် အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမည်ဟု စာရေးသူထံမှ အတည်မပြုနိုင်ပါ။
ဤ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူပြီး ၎င်းစည်းကမ်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က မကြာမကြာ မွမ်းမံပြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အပြောင်းအလဲများကို သတိပြုမိနိုင်ရန်အတွက် သင်သည် ဤစာမျက်နှာကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ရုတ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် အခွင့်အရေးများကို ရယူထားသည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား မည်သည့် အချိန်တွင် သို့မဟုတ် မည်သည့် အချိန်ကာလအတွက် အသုံးပြုမရဖြစ်သည့် မည်သည့် အကြောင်းရင်းအတွက်မဆို ကျွန်ုပ်တို့က တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာမကြာ ဤဝင်ရောက်အသုံးပြု၏ အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်စေ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်အား ရပ်ဆိုင်းမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် အခြား ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များထံသို့ ရောက်ရှိစေနိုင်သည့် လင့်ခ်များ ('လင့်ခ်ချိတ်ထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များ') ပါဝင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို www.howtouseabortionpill.org မှ စီမံခန့်ခွဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်သည် လင့်ခ်ချိတ်ထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသလို ၎င်းတို့အတွက်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့ကို သင်က အသုံးပြုရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက်ဖြစ်စေ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ လင့်ခ်ချိတ်ထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များအား သင်၏ အသုံးပြုမှုကို အဆိုပါ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုစီရှိ ပါဝင်သော အသုံးပြုမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်အချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုမည့်နည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို www.howtouseabortionpill.org/#privacy-policy တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် စီမံဆောင်ရွက်မှုအတွက် သင်က သဘောတူခွင့်ပြုပြီး သင်ပေးထားသည့် ဒေတာအချက်အလက်များအားလုံးသည် တိကျမှုရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။
သင်သည် ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ကို တစ်လွဲအသုံးချခြင်းမပြုလုပ်ရ။ သင်သည် ဖော်ပြပါအချက်များကို ပြုလုပ်ရမည်မဟုတ်- ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းအားပေးခြင်း၊ မရိုးဖြောင့်သည့် သဘောပါဝင်သော၊ နည်းပညာပိုင်းအရ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော၊ ယုံကြည်မှုကို ကျိုးပျက်စေသော သို့မဟုတ် ရိုင်းပျသော သို့မဟုတ် မဖွယ်မရာသော ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်၊ Trojan၊ Worm၊ Logic Bomb သို့မဟုတ် အခြားအရာကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပျံ့နှံ့စေခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၏ မည်သည့်နယ်ပယ်ကိုမဆို လှည့်ဖြားဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဒေတာအချက်အလက်များကို ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အခြား အသုံးပြုသူများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ အခြား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်များအနက် ရပိုင်ခွင့်များအပေါ် ချိုး‌ဖောက်ကျူးလွန်ခြင်း၊ 'စပန်း' ဟုခေါ်ဆိုလေ့ရှိသော မည်သည့် မြူဆွယ်ဖြားယောင်းသော ကြော်ငြာခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း အကြောင်းအရာကိုမဆို ပေးပို့ခြင်း၊ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပစ္စည်းမဆို၏ စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်အသုံးပြုမှုကို သက်ရောက်စေနိုင်ရန် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်သုံးစွဲရန် အားထုတ်ခြင်း။
ဤပြဌာန်းချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကဲ့သို့ သက်ရောက်စေမည်ဖြစ်ပြီး www.howtouseabortionpill.org သည် ယင်းသို့ ချိုးဖောက်မှုတိုင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲအာဏာပိုင်များထံ တိုင်ကြားမည်ဖြစ်ကာ သင့်အား ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့် အထောက်အထားကို ၎င်းတို့ထံ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်ဖြစ်သည်။
ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား သင်အသုံးပြုသည့်အတွက်ဖြစ်စေ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရေးသားတင်ပြထားသည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို သင်က ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ သင့်ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်များ၊ ဒေတာ သို့မဟုတ် အခြား ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဖြန့်ဖြူးထားသည့် Denial-of-service attack၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် နည်းပညာပိုင်းအရ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အခြားအရာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့် မည်သည့် ဆုံးရှံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက်မှ ကျွန်ုပ်တို့က တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ရေးသားမှုအကြောင်းအရာ
ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်ရှိ သို့မဟုတ် ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်မှတဆင့် သင့်အတွက် ရရှိနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် အကြောင်းအရာအားလုံးရှိ (ဓာတ်ပုံရုပ်ပုံများ အပါအဝင်) ဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်များသည် www.howtouseabortionpill.org သို့မဟုတ် ၎င်းအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးသူများထံတွင် ဆက်လက်ကျန်ရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများနှင့် စာချုပ်များဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ အဆိုပါ ရပိုင်ခွင့်များအားလုံးကို www.howtouseabortionpill.org နှင့် ၎င်း၏ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသူများက ထိန်းသိမ်းရယူထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်တစ်ကိုယ်ရေအသုံးပြုမှုအတွက် သီးသန့် ထောက်ပံ့သည့် ရေးသားမှုအကြောင်းအရာကို သိုလှောင်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဖော်ပြခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် သင့်ထံသို့ ပံ့ပိုးထားသည့် သို့မဟုတ် ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် မြင်တွေ့ရသော မည်သည့် ရေးသားမှုအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ထိုရေးသားမှုအကြောင်းအရာ၏ မူပွားများကို မည်သည့်ပုံစံနှင့်မျှ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ကြိုးကိုင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းဖြင့် ပွားများကူးယူခြင်းကို ခွင့်မပြုသလို သင်သည် မည်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ရေးသားမှုအကြောင်းအရာကိုမှ အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် ပံ့ပိုးထားသည့် ရေးသားမှုအကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်များအားလုံးကို ယေဘုယျ အချက်အလက်၊ ယေဘုယျ ဆွေးနွေးမှု၊ နှင့် ပညာပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ရေးသားမှုအကြောင်းအရာကို "ပကတိ မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း" ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အချက်အလက်များအား သင်၏ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် မှီခိုအားထားမှုကို သင့်ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ယူမှုဖြင့် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
မည့်သည့် အခြေအနေများတွင်မဆို www.howtouseabortionpill.org သည် ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် ရေးသားတင်ပြထားသည့် ရေးသားမှုအကြောင်းအရာအားအကြောင်းပြု၍ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်စေ အော့ဖ်လိုင်းတွင်ဖြစ်စေ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား အသုံးပြုသူများအကြား အပြန်အလှန် တုန့်ပြန်မှုများအကြားမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တစ်ကိုယ်ရေ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုအပါအဝင် မည်သည့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက်မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
သင့်အား ပံ့ပိုးထားသည့်အတိုင်း မျှတ၍ တရားဝင်ဖြစ်သော နည်းလမ်းနှင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါ သို့မဟုတ် ၎င်းအား အမြတ်ထုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဖက်တွင်မရှိသည့် အသင်းအဖွဲ့၊ ထောက်ခံခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် အားပေးထောက်ခံခြင်းပုံစံတစ်ခုခုဖြင့် အကြံပြုခြင်းကဲ့သို့ နည်းလမ်းဖြင့် လင့်ခ်ကို မတည်ဆောက်ရ။ သင်သည် သင်မပိုင်ဆိုင်သည့် မည်သည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်မဆိုမှ လင့်ခ်ကို တည်ဆောက်ခြင်း မပြုရ။ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ကို အခြား မည်သည့်ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင်မှ ဖရိမ်ချထားခြင်းမရှိစေရသည့်အပြင် သင်သည် ပင်မစာမျက်နှာမဟုတ်ဘဲ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုဆီသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လင့်ခ်ကိုလည်း ဖန်တီးခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်များကို ရုတ်သိမ်းနိုင်သည့် အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းရယူထားသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာချက်
တမူထူးခြားစွာဖြင့် သိသာထင်ရှားစွာ ဖော်ပြထားသည်မှအပ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် အထူးအလေးပေးဖော်ပြထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ (သူတို့၏ နာမည်များနှင့် ရုပ်ပုံများ)၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ရေးသားမှုအကြောင်းအရာ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် တည်နေရာများသည် www.howtouseabortionpill.org နှင့် ဆက်နွယ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းထားခြင်းမရှိပါ။ သင့်ပနေဖြင့် ထိုသို့သော ဆက်နွယ်မှု သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းမှု၏ တည်ရှိနေမှုအပေါ် မှီခိုမှုမပြုသင့်ပါ။ ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် အသားပေးဖော်ပြထားသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ/နာည်များ ဟူသမျှကို သက်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များက ပိုင်ဆိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် တံဆိပ်အမည်ကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြခြင်းသည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ပြရန် သို့မဟုတ် ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို www.howtouseabortionpill.org မှ အားပေးထောက်ခံခြင်းသို့မဟုတ် ဆက်နွယ်မှုပတ်သက်မှုရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟု မည်သည့်နည်းနှင့်မှ မမှတ်ယူရ။
သင်သည် ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စည်းကမ်းချက်များကို သင်၏ ချိုးဖောက်မှုမှ ပေါ်ပေါက်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ တောင်းဆိုမှုမှန်သမျှနှင့် အားလုံး၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ကုန်ကျမှုများ (ကန့်သတ်ဖော်ပြချက်မဟုတ်သော်လည်း တရားရုံးစရိတ်များ ပါဝင်သည်) မှ www.howtouseabortionpill.org၊ ၎င်း၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ဆွေးနွေးအတိုင်ပင်ခံသူများ၊ အေးဂျင့်များ၊ နှင့် ပေါင်းစည်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများအား လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်မှ ကင်းလွတ်စေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် သဘောတူသည်။
www.howtouseabortionpill.org သည် ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပါ မည်သည့် စာမျက်နှာကိုမဆို အချိန်မရွေး သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြင်ဆင်ရန်၊ ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန် ၎င်း၏ အလုံးစုံ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ရရှိစေရမည်။
ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအနက် မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆိုကို အသက်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက (သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ဖယ်ထုတ်ခြင်းပါဝင်သည့် ပြဌာန်းချက်အပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များပါ အခြား မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများမဆို၏ အသက်ဝင်မှုကို သက်ရောက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အခြားသော ဥပဒေပြဌာန်းချက်များမှာ အသက်ဝင်နှင့် သက်ရောက်မှု အပြည့်နှင့် ဆက်လက်ကျန်ရှိသည်။ မည်သည့် အပိုဒ်ငယ်/အပိုဒ်ခွဲငယ် သို့မဟုတ် အပိုဒ်ငယ်/အပိုဒ်ခွဲငယ်၏ အစိတ်အပိုင်းဟူသမျှကို ပြည့်စုံသမျှ ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ကျန်ရှိသည့် အကျုံးဝင်သော အစိတ်အပိုင်းကို ပေးဆက်ရန် အပိုင်းပိုင်းခွဲနိုင်ပြီး အပိုဒ်ငယ်ကို သင့်လျော်သလို အနက်ပြန်ဆိုရမည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အပိုဒ်ငယ်ကို အပိုဒ်ငယ်/အပိုဒ်ခွဲငယ်အား ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း မူရင်းအဓိပ္ပာယ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဆင်တူစေသည့် နည်းဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အနက်ပြန်ဆိုခြင်းအား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်ကို သင်သဘောတူခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တိုင်ကြားမှုများ ဦးစွာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားရာတွင် အသုံးပြုမည့် လက်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် တိုင်ကြားမှုများကို စီမံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် မည်သည့် တိုင်ကြားမှုများ သို့မဟုတ် သဘောထားမှတ်ချက်များမဆိုရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးပါ။
သင်သည် အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်များကို ချိုး‌ဖောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မည်သည့် အရေးယူမှုကိုမှ မပြုလုပ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်များကို သင်ချိုးဖောက်သည့် အခြားအခြေအနေတစ်ခုခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် ကုစားမှုများကို အသုံးပြုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခွင့်ရှိဆဲဖြစ်သည်။
အထက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များသည် ပါဝင်ဖက်များ၏ အလုံးစုံ သဘောတူညီချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သင်နှင့် www.howtouseabortionpill.org အကြား ယခင်နှင့် ယခု သဘောတူညီချက်တိုင်းနှင့် သဘောတူညီချက်အားလုံးကို အစားထိုးသည်။ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအနက် ပြဌာန်းချက်တစ်ခုခုအတွက် စွန့်လွတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်သည် www.howtouseabortionpill.org ၏ ဒါရိုက်တာမှ စာဖြင့်ရေးသားပြီး လက်မှတ်ထိုးမှသာလျှင် အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။
www.howtouseabortionpill.org သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်သို့ လာရောက်သည့် လူတိုင်း၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး တန်ဖိုးထားသည့်အပြင် သင့်အတွက် အသုံးဝင်သော နည်းလမ်းများဖြင့်လည်းကောင်း ဥပ‌ဒေအရ သင့်ရပိုင်ခွင့်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပုံစံဖြင့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီး အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤမူဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား သင်၏ အသုံးပြုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းရယူသည့် မည်သည့်ဒေတာမဆို၊ ဒေတာအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပြီး သင်နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒအား သင်၏ လက်ခံမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား သင်၏ ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုမှုတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု မှတ်ယူသည်။ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို လက်မခံ သဘောမတူပါက သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရမည်။"
ဤမူဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား အသုံးပြုမှုအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် မည်သည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များအတွက်ကိုမှ ဖြန့်ကျက်ထားခြင်းမရှိပါ (အဆိုပါ လင့်ခ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးထားသည်ဖြစ်စေ အခြားအသုံးပြုသူများက မျှဝေထားသည်ဖြစ်စေ)။ အခြား ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များက သင့်ဒေတာကို စုဆောင်းရယူခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း နည်းလမ်းအပေါ် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသလို ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ထံ မည်သည့်ဒေတာကိုမှ မပေးမီ အဆိုပါ မည်သည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်မဆို၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒများကို စစ်ဆေးရန် သင့်အား အကြံပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းရယူသည့် ဒေတာ
သင့် အထွေထွေဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်မှ အလိုအလျောက် စုဆောင်းရယူမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှ စုဆောင်းရယူနိုင်သည့် အထွေထွေဒေတာကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
IP လိပ်စာနှင့် တည်နေရာ
ဝဘ်ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစားနှင့် လည်ပတ်သုံးစွဲသည့်စနစ်၏ ဗားရှင်း
လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်နှင့်အတူ စတင်သည့် URL များ၏ စာရင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်ရှိ သင့်လုပ်ဆောင်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်သော မည်သည့် ဒေတာကိုမဆို စုဆောင်းရယူမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် နောင်အခါတွင် ထိုသို့ဒေတာကို စုဆောင်းရယူလိုကြောင်း ရည်ရွယ်လျှင် အသုံးပြုသူများထံမှ လိုလားပါကြောင်း သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ဒေတာကို ကျွန်ုတို့ မည်သို့ အသုံးပြုသလဲ။
အထွေထွေဒေတာအားလုံးကို EU အထွေထွေဒေတာ ကာကွယ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (GDPR) အရ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းပါသည်။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးရန် သင့်ဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုပါသည်။ ဤတွင်
A.1. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား သင်၏ ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ကို ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း
A.2. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အပေါ် သင်၏ အတွေ့အကြုံအား သင့်တော်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျရှိစေခြင်း
A.3. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်နှင့် သင်၏ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကို အစဉ် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား သင်၏ အသုံးပြုမှုကို သရုပ်ခွဲစိစစ်ခြင်း[နှင့် တုန့်ပြန်အကြံပြုချက်ကို စုဆောင်းခြင်း]။
အချို့ဖြစ်စဉ်များတွင် ဒေတာစုဆောင်းရယူမှုသည် ဥပဒေအရ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရသည့် သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်ချုပ်ဆိုမှုပါ သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်ရပိုင်ခွင့်များကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်စေရန် သင့်တော်သည့် အဆင့်များအားလုံးကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး GDPR နှင့် အကျုံးဝင်မှုရှိပြီး သက်ဆိုင်သည့် အခြား ဥပဒေများအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာကို မည်သို့နည်းနှင့် မည်သည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းသလဲ။
ထိုသို့အတိုင်းပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးပြုသူက ဖျက်သိမ်းပေးရန် အထူးတလည် တောင်းဆိုခြင်းမရှိသည့် အထွေထွေဒေတာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ မည်သည့် ဖြစ်စဉ်တွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဒေတာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိ သေချာစွာ လေ့လာစိစစ်နိုင်ရန် နှစ်စဉ်လေ့လာမှုကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဒေတာကို ဆက်လက်လိုအပ်ခြင်းမရှိတော့လျှင် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ဒေတာ အချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို ဥရောပ စီးပွားရေးနယ်မြေ ('EEA') ၏ ပြင်ပတွင် သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ (EEA တွင် နော်ဝေ၊ အိုက်စလန်နှင့် လီချက်စတိန်းအပါအဝင် EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံး ပါဝင်သည်)။ သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ကို အသုံးပြုပြီး အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် ဤအချက်ကို လက်ခံပြီး သဘောတူကြောင်း မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ EEA ၏ ပြင်ပနေရာတွင် ဒေတာကို သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့က ပြုလုပ်လျှင် သင့်ဒေတာကို EEA အတွင်းရှိသည့်အတိုင်း GDPR အရ ဘေးကင်းကင်း လုံခြုံမှုရှိရှိ ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ပါမည်။ အဆိုပါ အဆင့်များတွင် ကန့်သတ်ဖော်ပြချက်မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအကြား တရားဝင်ချုပ်ဆိုထားသည့် ကန်ထရိုက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအသုံးပြုမှုပါဝင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုထားသည့် စောင့်ရှောက်မှုအကာအကွယ်များ-
B.1. ဒေတာကို SSL ကုဒ်သွင်းပရိုတိုကောမှတဆတင့် လုံခြုံစွာ လွှဲပြောင်းခြင်း၊
B.2. ဒေတာကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် တည်ရှိသော Heroku Server များအတွင်း ကုဒ်သွင်းစနစ်ဖြင့် လုံခြုံစွာ သိုလှောင်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လုံခြုံရေးအစီအမံများကို ဆောင်ရွက်သော်ငြားလည်း အင်တာနက်မှတဆင့် ဒေတာများ တစ်ဆင့်ပေးပို့မှုသည် လုံးဝ လုံခြုံမှုမရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် အင်တာနက်မှတဆင့် ‌ဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ တစ်ဆင့်ပေးပို့သည့်အခါ သင့်လျော်သော ကြိုတင်လိုက်နာရမည့်အချက်များကို လိုက်နာရန် အကြံပေးထားကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ဒေတာကို မျှဝေပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ မျှဝေနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျိုးထိရောက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်အား ပံ့ပိုးရန်အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများတွင် ရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊ Google Analytics၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်း ပါဝင်နိုင်သည်။ အချို့ဖြစ်စဉ်များတွင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် သင့်အထွေထွေ ဒေတာအချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်သည်။ သင့်ဒေတာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် တောင်းဆိုသည့်အခါတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပ‌ဒေအရ သင့်ရပိုင်ခွင့်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များ၊ နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်များနှင့်အညီ သင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီး သင့်ဒေတာကို ဘေးကင်းကင်း၊ လုံခြုံစွာကိုယ်တွယ်ကြောင်း သေချာစေမည့် သင့်တော်သောအဆင့်များအားလုံးကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိတွင် ဤဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကန်ထရိုက်ချုပ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ထားသည်-
Google Analytics အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူနှင့် ပတ်သက်သည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ရယူပါ Google တွင် ယင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာရှိပါသည်။ https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝင်ထွက်မှု၊ အသုံးပြုမှုပုံစံများနှင့် အခြား အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဒေတာအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာမကြာ အဆိုပါဒေတာကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ မျှဝေနိုင်သည်။ ဒေတာကို ဥပ‌ဒေဘောင်များအတွင်း၌သာ မျှဝေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း။
တစ်ချို့သော အခြေအနေများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဒေတာတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးရန် ဥပဒေကြောင်းအရ တောင်းဆိုခံရနိုင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် အထွေထွေ ‌ဒေတာပါဝင်နိုင်ပြီး ဥပမာပြရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်နေရသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေပြဌာန်းချက်၊ တရားရုံးအမိန့်၊ သို့မဟုတ် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့တို့၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရသည့်အခါဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အဆိုပါ အခြေအနေများတွင် သင့်ဒေတာကို မျှဝေပေးရန်ငှာ သင့်ထံမှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ထပ်မံဆောင်းဆိုမည်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပြုလုပ်လာသည့် ဥပဒေကြောင်းအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရသည့် တောင်းဆိုမှုတိုင်းနှင့်အညီ လိုအပ်သလို လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးပြုသူများ၏ အချက်အလက်များ လျှီု့ဝှက်လုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် သင့်တော်သည့် နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စံချိန်စံညွှန်းမီ လုံခြုံရေး လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်သမားများ၊ အေးဂျင့်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သူတို့၏ သင့်တော်သော ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အရာခပ်သိမ်းကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
ကုမ္ပဏီတွင်းတွင် အသုံးပြုသူများအားလုံး၏ အချက်အလက်များဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ကို သူတို့၏ အလုပ်အကိုင် တာဝန်ခံမှုများကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးရန်ငှာ ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်လိုအပ်သူများအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် လျှို့ဝှက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အတွင်း အကျုံးဝင်သည်။
အချက်အလက်များအား ထိန်းသိမ်းထားခွင့်နှင့် ထုတ်ပေးခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သည့် အင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို အသုံးပြုရန်ငှာ ဒေတာအချို့အား စုဆောင်းရယူမှုကို တင်သွင်းပေးရန် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုပေးရန် သင့်အား တောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင့်ဒေတာကို သင့်အနေဖြင့် မည်သို့ ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်မလဲ။
သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သင့် ကိုယ်ရေးဒေတာအချက်အလက်တိုင်းအတွက် မူပွားကို တောင်းဆိုရန် တရားဝင်အခွင့်အရေးရှိသည်။ အသေးစိတ်အချက်များထပ်မံသိရှိနိုင်ရန် privacy@howtouseabortionpill.org ကို ဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့က ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုသလား။
"ကွတ်ကီးများ" သည် သင့်ကွန်ပျူတာ၏ ဟာ့ဒ်ရိုက်ဒ်ပေါ်သို့ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်မှ ထည့်သွင်းသည့် အချက်အလက်အစိတ်အပိုင်းငယ်များဖြစ်သည်။ ကွတ်ကီးများသည် အတိမ်းအစောင်းမခံနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို သင့်ထံမှ ရယူစုဆောင်းခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဝဘ်စာမျက်နှာသို့ ဝင်ထွက်သွားလာမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဒေတာကို သရုပ်ခွဲစိစစ်ရန်အတွက် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းက သင့်အနာဂတ်လာရောက်ကြည့်ရှုမှုများအတွက် သင်၏ ဦးစားပေးနှစ်သက်မှုများကို သိမ်းဆည်းရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဤအချက်က သင့်စိတ်ပါဝင်စားမှုများနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ကို သင့်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်နိုင်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စားသုံးသူများထံ ၎င်းတို့နှင့် ပို၍ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ကွတ်ကီးများကို လက်ခံရန် သို့မဟုတ် ပယ်ချရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကွတ်ကီးများကို ပယ်ချခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းမရှိနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ။.
အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရယူရန်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် Google Analytics၊ Piwik နှင့် Vimeo တို့ကို အသုံးပြုထားပြီး ၎င်းတို့က ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား မည်သို့ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေသည်။ ၎င်းတို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုမှုက သင့်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုမှုအပေါ် မည်သည့် အန္တရာယ်မှ ကျရောက်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား တိုးတက်‌ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ သင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပိုမိုအသုံးဝင်သော အတွေ့အကြုံကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် အခြား ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များထံသို့ ရောက်ရှိစေနိုင်သည့် လင့်ခ်များပါဝင်နိုင်သည်။ ယင်းအခြား ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့က တာဝန်ယူမည်မဟုတ်သည်ကို သတိပြုပါ။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဤဝဘ်ဆိုက်ဒ်မှ ထွက်ခွာသည့်အခါ သတိထားရန်နှင့် ၎င်းတို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုစီရှိ ကိုယ်ရေးလုံခြံမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြချက်များကို ဖတ်ရှုရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ဝဘ်ဆိုက်ဒ်များကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်သလို ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုသတိပေးချက်သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် စုဆောင်းရယူထားသည့် အချက်အလက်များအတွက်သာ အလုံးစုံသက်ဆိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ် သို့မဟုတ် ဤ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ မေးမြန်းလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ privacy@howtouseabortionpill.org အား အီးမေးလ်ပေးပို့ကာ ဆက်သွယ်ပါ။
အထူးသဖြင့် သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဒေတာနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်ကို တောင်းဆိုမှုဖြစ်ပါက သင့်မေးမြန်းမှုသည် ရှင်းလင်းပြတ်သားစေရန် သတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ
ကျွန်ုပ်တို့က လိုအပ်သည်ဟု ယူဆမိသည့်အခါဖြစ်စေ ဥပ‌ဒေမှ တောင်းဆိုအှုအရဖြစ်စေ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို မကြာမကြာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မည်သည့် အပြောင်းအလဲများကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တွင် ချက်ချင်း ရေးသားတင်ပြထားမည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် အလှည့်ကျဖြစ်ပေါ်မှုများအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဒ်အား သင်၏ ပထမအကြိမ် အသုံးပြုစဉ်တွင် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒပါ စည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံထားပြီးဖြစ်သည်ဟု သင့်အား မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤစာမျက်နှာကို ပုံမှန် စစ်ဆေးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။
ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာအားလုံးကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ Ipas၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ DKT International နှင့် carafem တို့ထံမှ စံနှုန်းများ၊ ပရိုတိုကောများနှင့်အညီ HowToUseAbortionPill.org အဖွဲ့မှ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (NAF) သည် မြောက်အမေရိကရှိ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများပါဝင်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး၊ ပရိုရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်ပါသည်။ HowToUseAbortionPill.org ရှိ အကြောင်းအရာသည် NAF မှထုတ်ပြန်သော 2020 ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။
Ipas သည် ဘေးကင်းသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့် သန္ဓတားခြင်းဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိစေခြင်းပေါ်တွင်သာ အာရုံစိုက်သည့် တစ်ခုတည်းသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ HowToUseAbortionPill.org ရှိအကြောင်းအရာသည် Ipas မှထုတ်ပြန်သော မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး 2019 ရှိ ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုအပ်ဒိတ်များ နှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) သည် နိုင်ငံတကာရှိ အများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက် တာဝန်ရှိသော ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးအေဂျင်စီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ HowToUseAbortionPill.org ရှိအကြောင်းအရာသည် WHO မှထုတ်ပြန်သော 2012 ဘေးကင်းသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း- ကျန်းမာရေးစနစ်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက် နှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။
DKT International သည် မိသားစုအစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ HIV/AIDS ကာကွယ်တားဆီးခြင်းနှင့် ဘေးကင်းသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက် အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်အချို့ပေါ်ရှိ ဆိုရှယ်မားကတ်တင်း၏စွမ်းအားပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ရန် 1989 ၌ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကိုယ်ကျိုးမဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
carafem သည် လူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကလေးအရေအတွက်ကို သတ်မှတ် ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် အဆင်ပြေပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်သော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် မိသားစုအစီအစဉ်ဆွဲခြင်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ဆေးဝါးကွန်ရက်ဖြစ်ပါသည်။